Iowa keessati namni dabalataa sadihii sababa Covid-19 akka du’an gabaafame, nama tokko kan Woodbury | KWIT
Nebraska keessati namni waliigalatti due 434 dha. Waliigalatti namni qabame ammo 38,200 dha. Governor Pete Ricketts oduu har’a ganama irrati dubattee ture. Innis Nebraskan akka seera Covid-19 jala deeman yaadachiise akka haguugi fuula godhachuu, harka dhiqachuu, fi addaan fageenya ufii eegachuu. akka inni jedheti vayrasii babalachuu fi hospitaala seenunis ni hira’isa jedhe. Ammas dabalataan akka jedhetti Nebrsaka kessati namni qorannoo godhe 341,000 dha.
Nebrsakan guyya har’a tarkaanfi corona virus afuritii darbanii jiru, tarkanfin inni itti aanu seeran kan dabarsan ta’uu himan. Haataumalee, Governor akka jedhetti sun kan uumamu yoom akka tae ammaaf hin beeyne jedhe.
Waggaa dhuma irrati barattooni Sioux City hundinuu nyaata tolaa kan argatan ta’a. Aanichi warra barattoota gara USDA ttiin dhamsa isaaniti dabarse jira. Barattooni Online nyaata dhufanii fudhachuu akka danda’an himame.
Deparmantriin mana fayyaa Iowa sababa Covid-19 jiraatonni Iowa namni darzanaa oliin lakahamaan du’uu
By Fatiya Adam • Sep 9, 2020
Deparmantriin mana fayyaa Iowa sababa Covid-19 jiraatonni Iowa namni darzanaa oliin lakahamaan du’uu himan. Iowa keessatti se’aati 24 keessati nama 500 haarawni oltu Covid-19 qabame.
Magaala Cedar Falls haguugi fuula akka godhatan murteesan, kunis magaala biraa Iowa kan dhukubni itti baayate tarkaanfi jarrri fudhatan kan dabalameedha. seera dirqama gochuun hagas maraa hin jiruu kan itti xiyyeefannu baayen barumsa irrati, haawasa garii keessa seeri gad dhiifame jira, ummani seeran warra hin godhaneef haguugi fuula akka godhatan himame.